JH-D59 रिचार्जेबल डिजिटल BTE श्रवण सहायता | हियरिङ एड्स आपूर्तिकर्ता
इमेल:[ईमेल सुरक्षित] मोबाइल: + 86-13790758128
चीन सर्वश्रेष्ठ श्रवण एड्स आपूर्तिकर्ता र निर्माता
एनालग सुनवाई एड्स
BTE सुनुवाई एड्स
ओपन फिट / आरआईसी सुनुवाई एड्स
रिचार्जेबल हियरिंग एड्स
ओटीसी सुनवाई एड्स
ब्लुटुथ श्रवण एड्स
पकेट / ब्लुटुथ हियरिंग एड एम्पलीफायर
उत्पादन सूची २०२२
अमेजन सुनवाई एड्स
श्रवण सहायता ज्ञान
श्रवण सहयोग मर्मत
घररिचार्जेबल हियरिंग एड्सJH-D59 रिचार्जेबल डिजिटल BTE सुनवाई सहायता
अत्यधिक बिक्री भएको
JH-D59 रिचार्जेबल डिजिटल BTE सुनवाई सहायता
उत्पादन ग्यालेरी Datasheet PDF डाउनलोड गर्नुहोस्
रिचार्जेबल: २० घण्टा ध्वनि एम्पलीफायरको लागि काम गर्दै। २ घण्टा पोर्टेबल केसको साथ चार्ज हुँदैछ। कुनै पनि समय र कहिँ पनि चार्ज गर्नुहोस्। ती साना, महँगो ब्याट्रीहरू बदल्न आवश्यक पर्दैन।
साधारण अपरेसन: mod मोड (सामान्य / हल्ला / टेलिफोन) बीच स्विच गर्न केवल एउटा बटन चाहिन्छ। यो पनि याद सेटिंग्स को समारोह छ। पछिल्लो पटक प्रयोग गरिएको मोड र भोल्युम अझै अर्को पटक प्रयोग गरीनेछ जब तपाईं यसलाई सुचारु गर्नुहुन्छ।
प्रयोग गर्न सजिलो: केवल २ बटन नियन्त्रण। खुला / बन्द गर्न लामो समयसम्म "M" seconds सेकेन्ड थिच्नुहोस्। मोड समायोजनको लागि छोटो प्रेस "M"। भोल्युम +/- को लागि छोटो प्रेस भोल्युम बटन, यसलाई बन्द गर्न आवश्यक छैन।
अदृश्य डिजाईन: व्यक्तिगत ध्वनि एम्पलीफायरहरू सानो, विवेकी र मिनी कानको पछाडि अदृश्य हुन सक्ने पर्याप्त हुन्छन्।
सही सेवा पछि बिक्री सेवा: हामी provide० दिनको मनी फिर्ता, १ वर्षको निर्माता वारंटी र असीमित ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछौं। यदि कुनै समस्या छ भने, तपाईं हाम्रो ग्राहक सेवा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
इच्छा सूचीमा थपियोइच्छा सूचीबाट हटाईयो 0
SKU: f19893be6576 विभाग: BTE सुनुवाई एड्स, रिचार्जेबल हियरिंग एड्स
पोर्टेबल चार्जिंग केस - सुरक्षा बाकसमा ०० एमएएच ब्याट्री निर्मित छ, जुन कुनै पनि समय र कहिँ पनि चुम्बकीय सम्पर्कको माध्यमबाट इयर एम्प्लीफायर चार्ज गर्नको लागि उपयुक्त छ। यो २ घण्टा चार्ज पछि २० घण्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ, अन्य प्रकारको उपकरणहरू भन्दा लामो समयसम्म रहन्छ।
कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि यो प्रयोग भन्दा पहिले यो पूर्ण चार्ज गरिएको छ।
हल्का निलो = चार्जिंग
हल्का गोरा = पूर्ण चार्ज
उचित ध्वनी ट्यूब छनौट गर्नुहोस् र कानको गुम्बज स्थापना गर्नुहोस्।
आफ्नो कान सफा गर्नुहोस् श्रवण एम्पलीफायर लगाउनुहोस् र कानको भित्र कन्चा लक राख्नुहोस्।
इकाई खोल्नको लागि '' M '' बटन बटन3थिच्नुहोस्।
भोल्युम बिस्तारै अप गर्नुहोस्।
उपकरण स्विच गर्नुहोस्
तीन अलग मोड
नियमित दैनिक सुन्न को लागी राम्रो छ।
छोटो प्रेस "M" (१ सेकेन्ड) → बिप = प्रोग्राम १ = सामान्य मोड
रेस्टुरेन्ट, आउटडोर इत्यादिका लागि राम्रो।
छोटो प्रेस "M" (१ सेकेन्ड) → बीप बीप = प्रोग्राम २ = NOISE MODE
टेलिफोन कुराकानीको लागि राम्रो छ।
छोटो प्रेस "M" (१ सेकेन्ड) → बीप बीप बीप = प्रोग्राम = = टेलीफोन मोड
प्राय: सोधिने प्रश्न र समाधानहरू:
१) किन त्यहाँ केही पृष्ठभूमि हल्ला छ?
वास्तवमा, यो सबै राम्रो मेसिनहरूमा विद्यमान विद्युतीय ध्वनि हो। सामान्यतया, उच्च शक्ति, अधिक स्थिर ध्वनि।
Ears कानमा राखे पछि खोल्नुहोस्, त्यसपछि आवाज बिस्तारै खोल्नुहोस्। सामान्यतया, तपाई यसको २- weeks हप्ता पछि बानी हुनेछ।
२) के कारण squeal हुन्छ?
यदि कानको गुम्बज कान नहरमा वा एयर लीकमा कान घुम्ती किनारमा राम्रोसँग सम्मिलित गरिएको छैन भने, जब उपकरण हात वा भित्रीको नजिक हुन्छ, केही आवाजको माइक्रोफोनमा फिर्ता जान्छ। ध्वनी पुन: प्रवर्धित छ जसले गर्दा ती कष्टकर सीटी हुन्छ।
Ear प्रयास गर्नुहोस् र उपयुक्त कान गुम्बज चयन गर्नुहोस्। कानको डोममा कानको गुम्बज राख्नुहोस् र यो निश्चित गर्नुहोस् कि यो भित्र घुसेको ठाउँमा फिट छ। यो कानमा राखे पछि उपकरण खोल्दै।
)) सामान्य रूपमा चार्ज गर्न सक्दैन？
Light एक उत्तम जडान को लागी सुनुवाई एम्पलीफायर को स्थिति को हल गर्नुहोस्।
Well प्रकाश नीलो हुन्छ जब यो राम्रोसँग जोडिएको छ; यो पूर्ण चार्ज हुँदा प्रकाश सेतो हुन्छ।
मैनको निर्माण-प्रक्रिया रोक्नको लागि तपाईंको उपकरण नियमित रूपमा सफा गर्नुहोस्। उपकरण ठीकसँग काम गरिरहनुहोस्।
अशक्तता एड्स सुनवाई एड बहाली सुनुवाइको लागि रिचार्जेबल
एनालॉग हियरिंग एडको लाउड ध्वनि BTE प्रकारहरू
FDA लाई वर्चुअल अदृश्य सुनुवाई सहायता अनुमोदन गरियो
अदृश्य सुनुवाई एड-यूएसबी चार्जिंग बेस BTE ध्वनि प्रवर्धक रिचार्जेबल इयर हियरिंग एड इयरफोन
एडिंग युएसबी सुनवाई एड आरआईसी रिचार्जेबल हियरिंग एम्प्लीफायर
डिजिटल हियरिंग एम्प्लीफायर एड - जिंगहाओ वयस्क र वरिष्ठहरूका लागि सुनवाई प्रवर्धक
तल्ला 6, Huicheng औद्योगिक भवन, नम्बर 9, Huifeng पूर्व 2nd रोड, Zhongkai हाई-टेक क्षेत्र, Huizhou शहर, चीन।
मोबाइल: + 86-13790758128
डिजिटल सुनवाई एड्स
न्यूजलेटर को लागी साइन अप गर्नुहोस्
न्यूजलेटर प्राप्त गर्न साइन अप गर्नुहोस्
Huizhou Jinghao मेडिकल टेक्नोलोजी कं, लि। सबै अधिकार सुरक्षित।
सबै विभागBTE सुनुवाई एड्सडिजिटल सुनवाई सहायताITE Hearing Aidsओपन फिट / आरआईसी सुनुवाई एड्सपकेट / ब्लुटुथ हियरिंग एड एम्पलीफायररिचार्जेबल हियरिंग एड्सअसंगठित
पासवर्ड पासवर्ड खो गयो?
प्रयोगकर्ता नाम अथवा इमेल
नयाँ पासवर्ड प्राप्त गर्नुहोस्
वस्तुहरूको तुलना गर्नुहोस्